विदेशी कम्पनीलाई पनि गुणस्तर चिन्ह, अहिलेसम्म २५ वस्तुलाई प्रदान ! - विदेशी कम्पनीलाई पनि गुणस्तर चिन्ह, अहिलेसम्म २५ वस्तुलाई प्रदान !
विदेशी कम्पनीलाई पनि गुणस्तर चिन्ह, अहिलेसम्म २५ वस्तुलाई प्रदान !
नेपालबहस संवाददाता २०७५, २० श्रावण, 03:20:12 AM
काठमाडौँ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले विदेशी उद्योगबाट उत्पादित २५ वस्तुलाई नेपाल गुणस्तर चिन्ह ‘एनएस’ प्रदान गरेको छ ।
विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनी विदेशी मुलुकबाट नेपाल गुणस्तर चिन्ह लिने उद्योगमा क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको बताउछन । “प्रक्रिया पु¥याएर एनएस चिन्ह लिने विदेशी कम्पनीलाई हामीले एनएस चिन्ह प्रदान गर्दै आएका छौँ,” उनले भने ।
२०७५, २० श्रावण, 03:20:12 AM